“Raharaha kidnapping Arman Kamis”: nisy roa hafa indray voasambotra omaly | NewsMada
“Raharaha kidnapping Arman Kamis”: nisy roa hafa indray voasambotra omaly
Mihazakazaka ny fandehan’ny fanadihadiana sy famotorana mikasika ny “raharaha kidnapping Arman Kamis”. Ankoatra ny olona iray, voasambotra ny talata teo ary ireo polisy sy miaramila, izay efa navotsotra afakomaly tany Toamasina, fantatra, araka ny loharanom-baovao azo antoka fa nisy olona roa hafa indray, voasambotra taty Antananarivo, omaly.
Taorian’ny fanadihadiana niainga avy any Toamasina momba ilay raharaha fakana an-keriny an’i Arman Kamis dia nisy indray ny fisamborana nataon’ny zandary taty Antananarivo, omaly. Vokany, olona roa voarohirohy ho isan’ny niray tsikombakomba tamin’ity raharaha ity. Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana.
Fa nisy koa omaly valandresaka ho an’ny mpanao gazety tao amin’ny biraon’ny vondrontobim-pileovan’ny zandarimariam-pirenena Atsinanana niaraka tamin’ny tafika sy ny polisy. Ny kaomandin’ny vondrontobim-pileovan’ny zandary Atsinanana, ny Kly Ranaivoarison Théodule ny avy amin’ny zandarimaria, ny chef de corps 1/Rm3, ny Kly Randriamifidy Andy Patrick kosa ny avy amin’ny Tafika raha ny kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys sy ny kaomisera Rafaliarivo Jules ny avy amin’ny polisim-pirenena. Notinapaka omaly ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny samy mpitandro filaminana momba ity raharaha ity. Koa raha misy raharaha mahasaringotra mpitandro filaminana amina raharaha toy izao dia misy hatrany ny fifanaraham-piasa toy izao, raha ny fanazavan’izy ireo hatrany.
Filankevitry ny minisitra momba ny “kidnapping”
Voaresaka nandritra ny filankevitry ny minisitra, natao ny 28 novambra farany teo, tetsy amin’ny Lapan’Ambohitsorohitra ny momba ny raharaha “kidnapping” roa farany, nitranga tany Toamasina. Araka izany, miantso ny mpanao famotorana, ny fitsarana ny filankevitry ny minisitra mba hamoaka na hamaky am-batolampy ny tena marina amin’itony raharaha “kidnapping” itony. Tsy hitsitsy ireo voarohirohy fa hampihatra ny lalàna mifandraika amin’ny heloka nataony.
Nandritra io filankevitry ny minisitra io ihany koa no nahatsiarovana sy nanomezam-boninahitra ireo mpitandro filaminana lavo teo am-panatanterahana ny asany amin’ny ady amin’ny asan-dahalo.
Farany, hisy ny fanentanana hiadiana amin’ny firongatry ny fitsaram-bahoaka any Toamasina, nanomboka omaly ary hifarana anio 30 novambra.
Vaccin anti-Covid-19: 192. 574 personnes vaccinées 22/09/2021
Journée mondiale des pharmaciens: conférence-débat sur la vaccination 22/09/2021